Ngano yemashiripiti muChurumbelo Waterfall | Absolut Kufamba
Ngano yemashiripiti muChurumbelo Waterfall
Takafamba kumaodzanyemba kwe Korombiya, kunyanya ku Putumayo Dhipatimendi, kusangana neimwe yenzvimbo dzemashiripiti muSouth America. Ikoko, padyo neguta re Mocoa nzvimbo yakasikwa yakanaka yakavanzwa uye yakaputirwa mune inoshamisa halo yenyaya: iye Churumbelo.
Muchokwadi, Churumbelo izita renzvimbo yemakomo inogara mahekita anopfuura gumi nemaviri emusango. Iyo yakasvibira uye gobvu labyrinth izere nehupenyu kuburikidza iyo yakawanda rwizi makosi anomhanya. Iyi mamiriro inokurudzira kwazvo kune chero munhu ane iyo inofara pfungwa yekuiwana iyo. Makona ayo ari kure uye akavanzika ari mamiriro akakodzera engano nengano.
Ngano yatichazotaura nezvayo nhasi ine mavambo ekare-kare, kunyangwe kusvika kweSpanish kukondinendi yeAmerica. Ichokwadi ndechekuti dunhu rese iri raigara mazana emakore apfuura nechinyakare budiriro ine chekuita nerudzi rwazvino rwe Ingas (isingafanirwe kuvhiringidzwa nemaInca), sezvakaratidzwa nezvakawanda zvakasara zvezvinocherwa mumatongo zvinowanda munzvimbo yese.
Zvinoshamisa zvechokwadi kuti ngano iyi yakwanisa kufamba kudzoka munguva uye ikasvika kwatiri tichitenda mutsika yemuromo yevanhu vemo vemuColombia sango. Izvi ndizvo zvaanotiudza:
1 Pfuma yaChurumbelo
Dunhu rese reChurumbelo rizere nemapopoma nemvura. Vashanyi, vakwezvwa nerunako rwepasi uye hupfumi hwayo hwepanyama, vanouya kune vazhinji vavo kuzonakidzwa nekushambira kunozorodza mumvura yaro yakajeka. Nekudaro, vazhinji havazivi kuti chimwe chazvo chinovanza chakanakisa pfuma.
Mukudonha kwayo, iyo Churumbelo waterfall, yakaumbwa ichitevedza rwizi Ponchayaco rwizi, inoumba dziva diki rakakomberedzwa nesango gobvu. Nzvimbo yekudenga. Zvinonzi zvakadzika pasi rinohwandisa chifananidzo chakasimba chegoridhe muchimiro chemwana. Chinhu chakakosha icho chingangodaro chakakandwa ipapo kuti chivanze kubva kumaoko ane makaro evakundi.
Iyo Bogotá Goridhe Museum inoratidza huwandu hwakawanda hwegoridhe senge iyo inogona kuvanzwa muEl Churumbelo
Sekureva kwengano, vamwari vesango kubva ipapo vakatora hanya kuchengetedza iyi pfuma kure nevanoda kuziva uye vapambi. Uye ivo vakasarudza iyo waties Kune iri basa.
Zvinoenderana netsika dzekare dzevanhu vemuno venzvimbo iyi, Watis mweya inogara musango. Ndivo avo vanofungidzira kunaya kukuru kwemvura uye gales ine chisimba iyo yakarova nzvimbo iyi, ichiita kuti sango ive nhare yegirini isingakundiki. Ndivowo zvakare kuvhiringidza vaongorori uye vafambi nemiraira uye nzira dzinotenderera. Sezviri pachena, maWatíes ane mutsa zvakanyanya nevashanyi, vanovarega vachienda kuChurumbelo kuti vanakirwe nenzvimbo.
Ingano Here Kana Kuti Ichokwadi? Zvakaoma kutaura, asi hafu yakakosha hafu nekuseka iko kune vashanyi vazhinji vanotsvaga gungwa vachitsvaga hupfumi panguva yekushanya kwavo kumvura, vachitsvaga pakati pematombo nemakomba munzvimbo. Vamwe vanoti vakaona goridhe rinopenya pasi pemvura apo mwaranzi yezuva yakarova zvakananga.
Sezvingatarisirwa, hapana munhu akagona kuwana chero chinhu kudanana. Zvingangodaro, iyo Churumbelo pfuma haipo, asi icho chimwe chinhu icho pasina munhu anogona kuvimbisa nechokwadi.
El Churumbelo nepfuma yayo isinganzwisisike yengano inowanikwa mukati memiganhu ye Sierra de Macarena Natural Park, chimwe chezvakawanda mapaki uye zvisikwa zvisikwa zveColombian Amazon.
Iyi paki ine kwayakatangira mu Biological chengetedzo yeLa Macarena, yakavambwa muna 1948. Iyi nzvimbo yaisanganisira nzvimbo yakakura yegeological ye Guiana Shield, pamwe nekuwedzera kwekufungidzira kwemakiromita zana nemakumi matatu kubva kumabvazuva kusvika kumadokero uye anenge makiromita makumi matatu kubva kuchamhembe kusvika kumaodzanyemba
Iyo Sierra de la Macarena Natural Park izere nenzvimbo dzerunako rukuru
Iyo Sierra de La Macarena inoramba iri mukati akasiyana siyana enharaunda uye ecosystems, kubva kumasango ane hunyoro nemasango akazara nemvura kusvika kunzvimbo dzinokwesha nzvimbo nenzvimbo dzemasavana eAmazonia. Iyi nharaunda inzvimbo yekugara yezvisingaverengeke zvezvirimwa nemhando dzemhuka, mazhinji acho anowanikwa.
Kuwedzera kune hunofadza uye hunhu hwemusango, muSierra de Macarena Natural Park kune zvakare nzvimbo dzokuchera matongo yakakosha mumabheseni e Duda neGuayabero nziziZvakavanzika petroglyphs uye mapikicha zvakafukunurwa ipapo izvo zviri humbowo hwetsika dzechinyakare dzaigara munzvimbo iyi mazana emakore apfuura.
Nehurombo, ndangariro uye ruzivo rwevakawanda vevanhu ava zvakarasika zvachose. Zvinosuruvarisa, nekuti pamwe vanogona kujekesa ruzivo rweiyo ngano yeChurumbelo uye neyakajeka uye isinganzwisisike yegoridhe chimiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Ngano yemashiripiti muChurumbelo Waterfall
Luz Mercedes Moreno-Moreno akadaro
Chiratidziro, mapopoma emvura, ndinoda kukutaurirana newe nekuti muEstrella Municipality yeMedellín, pane chidimbu chenyika chababa vangu icho chinewo mapopoma anoyevedza, uye ndinoda kuita chirongwa che ecotourism, hafu yeawa kubva kuMedellín.
Pindura Luz Mercedes Moreno Moreno
Ini ndinokurudzira kuuya ku putumayo, iri super bakano, ine vanhu vakanaka kwazvo.
AUI KUDZANYA PERREO, PERREO PERREO DOGO PERREO PERREO
Vanamwari vatatu vakuru vechiHindu